नेपाल टेलिकमले ल्यायो आकर्षक समर अफर – Insurance Khabar
९ मंसिर २०७७, मंगलवार
नेपाल टेलिकमले ल्यायो आकर्षक समर अफर
प्रकाशित मिति : १ श्रावण २०७७, बिहीबार १०:४३
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले ग्राहकहरुको सुविधाका लागि विभिन्न प्याकेजसहितको आकर्षक समर अफर उपलब्ध गराउने भएको छ । यसअघि नै उपलब्ध स्प्रिङ अफर अन्तर्गतका प्याकेजहरुलाई परिमार्जन गरी समर अफर उपलब्ध गराइएको टेलिकमले जनाएको छ ।
समर अफरअन्तर्गतको सेवा साउन १ गते बिहीबारदेखि ९० दिनसम्म उपलब्ध हुनेछ । पहिलेदेखि नै उपलब्ध केही प्याक यथावत् राखिएको छ भने केही प्याकलाई परिमार्जन गरी थप ग्राहकमैत्री बनाइएको टेलिकमको भनाइ छ । कम्पनीले युट्युब स्ट्रिमिङ डाटा प्याकअन्तर्गत २५ रुपैयाँमा एक दिनका लागि १ जीबी डाटा उपलब्ध गराएको छ ।
त्यस्तै सोसल मिडिया प्याकअन्तर्गत १५ रुपैयाँमा एक दिनका लागि २ सय एमबी डाटा उपलब्ध हुनेछ । सोसल मिडिया प्याकमार्फत फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम र ह्वाट्सएप चलाउन सकिनेछ ।
कम्पनीका अनुसार रातिको समयमा प्रदान गरिएको भ्वाइस प्याक यसअघि राती १० बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म मात्र उपलब्ध भएकोमा अब एक घण्टा बढाएर बिहान ७ बजेसम्म उपलब्ध गराइनेछ ।
नाइट टाइम भ्वाइस प्याकअन्तर्गत १० रुपैयाँमा उपलब्ध ६० मिनेटको भ्वाइस प्याक यथावत उपलब्ध छ भने १५ रुपैयाँमा ३ रातका लागि २ सय मिनेट र ३० रुपैयाँमा ७ रातका लागि ३ सय ५० मिनेट भ्वाइस प्याक उपलब्ध हुनेछ । यी प्याक राती १० बजे देखि बिहान ७ बजे सम्म प्रयोग गर्न सकिने टेलिकमले जनाएको छ ।
अलटाइम डाटा प्याकअन्तर्गत ३ दिन, ७ दिन र २८ दिनका लागि लिन सकिने प्याकमा केही परिमार्जन गरिएको छ । यसमा ६० रुपैयाँमा ३ दिनका लागि ४ सय एमबी, एक सय रुपैयाँमा ७ दिनका लागि ८ सय एमबी, २ सय ८० रुपैयाँमा २८ दिनका लागि २।५ जीबी, ५ सय रुपैयाँमा २८ दिनका लागि ७ जीबी र ८ सय रुपैयाँमा २८ दिनकै लागि १६ जीबी डाटा उपलब्ध हुनेछ । डे डाटा प्याकअन्तर्गत अब १० रुपैयाँमा ८० एमबी र १८ रुपैयाँमा २५० एमबी डाटा प्याक प्राप्त गर्न सकिने छ । बिहान ६ देखि साँझ ६ बजेसम्म प्रयोग गर्न सकिने सो प्याकको समयावधि २४ घण्टा हुनेछ ।
यसैगरी वान नाइट अनलिमिटेड डाटाअन्तर्गत राति ११ देखि बिहान ६ बजेसम्म चलाउन सकिने प्याकेज २० रुपैयाँमा उपलब्ध हुने कम्पनीले जनाएको छ । डे भ्वाइस प्याकअन्तर्गत १२ रुपैयाँमा बिहान ५ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म १ सय २० मिनेट कल गर्न सकिने अर्को प्याक पनि उपलब्ध हुनेछ । यो अफरमा प्रदान गरिएको १ सय २० मिनेट एकैदिन प्रयोग भएन भने भोलिपल्ट २४ घण्टासम्म सोही अवधिमा प्रयोग गर्न सकिने छ । त्यस्तै १५ रुपैयाँमा बिहान ५ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म लागू हुने अनलिमिटेड कल अफरलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
कम्पनीले लार्ज डाटा प्याकअन्तर्गत अब १ हजार ६ सय रुपैयाँमा ६० दिनका लागि ३० जीबी प्याक र तीन हजार रुपैयाँमा १ सय २० दिनका लागि ६० जीबी प्याक उपलब्ध हुने जनाएको छ । फोरजी÷एलटीई अफर अन्तर्गत १५ रुपैयाँमा १ दिनका लागि जम्मा १ सय एमबी डाटा उपलब्ध हुनेछ । यसबाट ५० एमबी सबै नेटवर्कमा प्रयोग गर्न सकिने छ र थप बोनसको रुपमा फोरजी नेटवर्कमा प्रयोग गर्न सकिने ५० एमबी डाटा उपलब्ध हुने कम्पनीले जनाएको छ ।
दुई जीवन बीमा कम्पनीले व्यतित बीमालेख नविकरणमा १०० प्रतिशत छुट सुविधा
रिलायबल नेपाल लाइफद्धारा मृत्यु बीमा दाबी भुक्तानी
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकद्धारा ३ कम्पनीलाई १ करोड अनुदान
सिभिल लघुवित्तको शेयर सूचिकृत
नेपाल एसबिआई मर्चेण्ट बैंकिङ्गमा रोजगारीको अवसर
थप १७९० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
नयाँ कम्पनीमध्ये महालक्ष्मी लाईफले घोषणा गर्यो सर्बाधिक बोनस दर
एक नम्बर इन्स्योरेन्स कम्पनी बन्ने दौडमा रहेको नेको र लिडर कम्पनी शिखरलाई दाँजेर हेर्दा
१७ जीवन बीमा कम्पनीको नाफा २४ प्रतिशतले बृद्धि, दुई कम्पनीको घट्यो, अन्यको अवस्था कस्तो ?
यूनाइटेड इन्स्योरेन्सको निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी उपासना पौडेललाई
एलआईसी नेपालको नयाँ बोनसदर सार्वजनिक, अधिकतम् ८० रुपैयाँसम्म बोनस पाइने
१७ निर्जीवन बीमा कम्पनीको नाफा २५ प्रतिशतले बृद्धि, दुई कम्पनीको घट्यो, कसको अवस्था कस्तो ?
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बीमा समितिविरुद्ध उजुरीका चाङ्, सर्वोच्चमा रिट
मंसिर १२ देखि एनआईसी एशिया डाइनामिक डेब्ट फण्डको इकाई बिक्रि खोलिने